Olan’ny any atsimo : ho tratran’ny tsy fanjarian-tsakafo mahery vaika ny ankizy 120 000 | NewsMada
Olan’ny any atsimo : ho tratran’ny tsy fanjarian-tsakafo mahery vaika ny ankizy 120 000
Ho tratran’ny tsy fanjarian-tsakafo mahery vaika ny zaza 120 000 any atsimo amin’ity taona ity ary ho tena lalim-paka ny 20 000 amin’ireo, araka ny fanadihadiana ny faharefoana teny anivon’ny distrika manoloana ny antoka sakafo sy ny tsy fanjarian-tsakafo mahery vaika. Efa navoakan’ny fanjakana sy ny mpiray ombon’antoka, ny volana avrily lasa teo, ny valin’ny fanadihadiana. Enina ny distrika niantefan’ny fanadihadiana: i Toliara II, Ampanihy, i Beloha, Ambovombe, i Betioky ary i Taolagnaro. Mbola hisy fitiliana ny tsy fanjarian-tsakafo mahery vaika eny anivon’ny fokontany ho an’ny zaza enim-bolana hatramin’ny 5 taona hanamafy ny fanadihadiana efa vita amin’ny distrika valo mandrafitra ny faritra any atsimo ary iarahana amin’ny Unicef ny asa. Hivoaka avy amin’io tatitra io ny tahan’ny tsy fanjarian-tsakafo ao amin’ny distrikan’Amboasary sy i Bekily. Havoaka ny volana novambra ho avy izao ny tahan’ny tsy fanjarian-tsakafo isa­ky ny distrika ho fitaovana azon’ny mpisehatra eny ifotony ampiasaina hamaliana ny filana tohana, araka ny fanazavan’ny Fandaharanasan’ny Firenena mikambana momba ny sakafo (Pam).
Nitarika ny olana momba ny sakafo any amin’ireo distrika ireo ny tsy fahampian’ny rotsak’orana ny taona 2019 sy ny fikorontana teo anivon’ny tsena anatiny. Niteraka olana fahasalamana toy ny fivalanana ny tsy fahampian-drano hidiovana sy hosotroina. Eo koa ny aretina tazo izay nirongatra tamin’ny fiandohan’ny taona. Vao mainka nihasarotra ny zava-misy noho ny hamehana ara-pahasalamana nahaverezana asa ka tsy nahafahana nanome sakafo ara-pahasalamana ny vehivavy mitondra vohoka sy ny kilonga madinika. Raha tsy misy ny hetsika haingana, manomboka ny volana septambra ho avy izao, mbola ho ratsy no ho izao ny fanjarian-tsakafo amin’ireo distrika ireo.
Efa mihetsika ny ACF sy ny Pam
Efa nihetsika ny Action contre la faim (ACF) miaraka amin’ny ekipa 14 mitety vohitra mitily sy mandray an-tanana ny ankizy tratran’ny tsy fanjarian-tsakafo sy marary.
“Mitondra tohana sakafo ho an’ny vehivavy sy ny ankizy tena marefo ny Pam mba tsy hihombo ny faharefoan’izy ireo”, hoy ny solontenan’ny Pam eto amintsika, i Moumini Ouedraogo. Ny Unicef, manohana hatrany ny minisiteran’ny Fahasalamana sy ny Ofisim-pirenena momba ny fanjarian-tsakafo mba ho afa-miasa sy mandray ny ankizy tratran’ny tsy fanjarian-tsakafo ny rafi-pahasalamana misy amin’ireo toerana ireo.